कस्तो सपना देखे कस्तो फल पाइन्छ ?dream and its symbol nepali belief ~ Khabardari.com
कस्तो सपना देखे कस्तो फल पाइन्छ ?dream and its symbol nepali belief
1:13 AM Admin No comments
निन्द्रामा हरेक व्यक्तिले देखेको सपनाले विपनामा पनि सोच्न बाध्य बनाउँछ । हिन्दु मान्यता अनुसार हरेक सपनाको एक विशेष फल अवश्य प्राप्त हुन्छ।
सपनाले भविष्यमा हुने वाला राम्रो नराम्रो घटनाको बारेमा पहिला नै जानकारी दिन्छ। तर हामी ती संकेतलाई बुझ्न सक्दैनौं । प्राचीन धर्मग्रन्थ वाल्मिकी रामायण, अग्नी पुराण आदिमा सपनाको माध्यमबाट भविष्यमा हुने घटनाहरुको बारेमा जानकारी पाएको वर्णन भेटिन्छ।
अब तपाईले देख्नुभएको सपनाको फल के हुन्छ त्यो हामी जानकारी दिनेछौँ । यहाँ यस्तै केही सपना र यसका फलको बारे चर्चा गरिएको छ ।
१. आँखामा गाजल लगाउनु - शारीरिक कष्ट
२. आफ्नै काटेको हात देख्नु - कुनै नजिकको प्रियजनको मृत्यु
३. उजाड बगैचा देख्नु - दुःख पाउने
४. मोटो भैसी देख्नु - अन्न सस्तोमा पाउने
५. दुब्लो भैसी देख्नु - अन्न महंगो हुनु
६.बाख्रा देख्नु - शत्रुको डर
७. राजनेताको मृत्यु भएको देख्नु - देशमा समस्या आउनु
८. पहाड हल्लिएको देख्नु - विरामी हुने डर
९.पुरी खाएको देख्नु - खुशीको समाचार आउनु
१०. तामा देख्नु - गोप्य कुरा पत्ता लाग्नु
११. बेडमा सुतेको देख्नु - गौरव तथा प्रतिष्ठा पाउनु
१२. थुक देख्नु - समस्यामा पर्नु
१३. हरियालीपुर्ण जंगल देख्नु - खुशियाली आउनु
१४. आफूलाई उडेको देख्नु - कुनै समस्याबाट छुटकारा पाउनु
१५. सानो जुत्ता लगाएको देख्नु - कुनै महिलासँग झगडा हुनु
१६. स्त्रीसँग मैथुन गर्नु - धन प्राप्त हुनु
१७. झगडा गर्नु - प्रसन्नता प्राप्त हुनु
१८. लडाईमा मरेको देख्नु - राजनीतिमा सफल हुनु
१९. चन्द्रमा झरेको देख्नु - कुनै समस्यामा पर्नु
२०. चन्द्रग्रहण देख्नु - कुनै रोग लाग्नु
२१. आफ्नै दाँत भाँचिएको देख्नु - समस्या बढ्दै जानु
२२. ढोका खुल्ला देख्नु - कुनै व्यक्तिसँग मित्रता हुनु
२३. बन्द ढोका देख्नु- धन नास हुनु
२४. धुँवा देख्नु - व्यापारमा हानि
२५. भुकंप देख्नु - सन्तानलाई दुःख कष्ट हुनु
२६. चश्मा लगाएको देख्नु - ज्ञान बढ्छ
२७. बत्ती बालेको देख्नु - नयाँ अबसर प्राप्त हुनु
२८. मासु देख्नु - आकस्मिक धन लाभ
२९. पूजा पाठ गरेको देख्नु - समस्याको अन्त हुनु
३०. फलको झुप्पा देख्नु - छिटो धन प्राप्त हुने योग
३१. सेतो परेवा देख्नु - शत्रुसँग मित्रता हुनु
३२. बिरालो एक आपसमा झगडा गरेको देख्नु - मित्रसँग झगडा
३३. सेतो बिरालो देख्नु - धन नास हुनु
३४. समाधिस्थल देख्नु - सौभाग्य प्राप्तिमा योग
३५. गोबर देख्नु - पशु व्यापारमा लाभ
३६. उजाड जंगल देख्नु - समस्या बढ्नु
३७. मरेको मानिस देख्नु - रोगबाट मुक्त
३८. गरगहना देख्नु - कार्य पुर्ण हुनु
३९. जुवा खेलेको देख्नु - व्यापारमा लाभ
४०. पैसा उधारोमा दिनु - अत्यधिक धन प्राप्त हुन्छ।
४१. चील देख्नु - शत्रुबाट नोक्सान हुनु
४२. चाँदी देख्नु - धन प्राप्त हुनु
४३. कैची देख्नु - घरमा झै-झगडा हुनु
४४. खेतमा पाकेको गहुँ देख्नु - धन लाभ हुनु
४५. काग देख्नु - कसैको मृत्युको समाचार आउनु
४६. कुकुर देख्नु - पुरानो साथीसँग भेट हुनु
४७. नदीको पानी पिएको देख्नु - सरकारी लाभ हुनु
४८. सेतो फूल देख्नु - कुनै समस्याबाट छुट्कारा मिल्नु
४९. रातो फूल देख्नु - भाग्य चम्कनु
५०. घोडा देख्नु - संकट हट्नु
५१. मोती देख्नु - छोरी पाउने योग
५२. गाडेको धन देख्नु - अचानक धन लाभ हुनु
५३. झरना देख्नु - दुःखको अन्त हुनु
५४. चेक लेखेर दिएको देख्नु - विरासतमा धन मिल्नु
५५. कुवामा पानी देख्नु - धन लाभ
५६. सुन्दर स्त्री देख्नु - प्रेममा सफलता
५७. खुकुरी देख्नु - संकटबाट मुक्ति
५८. चन्दन देख्नु - शुभ समाचार आउनु
५९. नक्शा देख्नु - कुनै योजनामा सफलता मिल्नु
६०. नून देख्नु - स्वास्थ्यमा लाभ
६१. सुकेको घाँस देख्नु - जीवनमा समस्या
६२. रुद्राक्ष देख्नु - शुभ समाचार आउनु
६३. स्वर्ग देख्नु - भौतिक सुखमा वृद्धि
६४. सूर्य देख्नु - विशेष व्यक्तिसँग भेट हुने योग